IQumrhu eliSebenzayo II
Intshayelelo - Konjunktiv II
Uninzi lwexesha, ootitshala kunye neencwadi zezifundo zilawula ukwenza isimo sengqondo ( der Konjunktiv ) esicacile ngakumbi kunokuba sifanele sibe. Ukuzithoba kunokudideka, kodwa akufanele ukuba.
Ekuqaleni, wonke umfundi wokuqala wesiJamani uyafunda le fomu yesiqhelo esiqhelekileyo sesiNgesi: möchte (angathanda), njengokuthi " Ich möchte einen Kaffee. " ("Ndingathanda [indebe yekhofi.") Lo ngumzekeliso yesenzi sesigqibo esifumene nesigama.
Akukho mithetho eqinile ukufunda, nje ngokulula ngegama lesiqendu isigama. Ininzi yokuzithoba ingaphathwa ngale ndlela ... ngaphandle kokukhathazeka ngemithetho eqingqiweyo okanye iifomula!
I-Konjunktiv II - Ixesha elidluleyo
Kutheni, ukuba ucela isithethi esingumthonyama saseJamani ukuba uchaze ukusetyenziswa kokuzithoba, uya kwenzeka ukuba (a) angazi ukuba yiyiphi imbeko, kwaye / okanye (b) akanako ukukuchazela ? Oku, nangona iJamani (okanye i-Austrian okanye iSwitzerland) inokukwazi ukuyisebenzisa kwaye isebenzise ukuzithoba ngexesha lonke! Ewe, ukuba ukhulile uthetha isiJamani, nawe unako. (Le nto yayisivakalisi saseNgilandi kwi Konjunktiv !) Kodwa kwabo bangabikho , nantsi incedo elithile.
Yiyiphi iNgqungquthela II?
I-subjunctive eyadlulileyo isenzi "isimo sengqondo" esetyenziselwa ukuveza ukungaqiniseki, ukungathandabuzeki, okanye imeko echasene nayo. Kwakhona kaninzi kusetyenziswa ukubonakalisa ukuziphatha kunye nokuziphatha kakuhle-isizathu esivakalayo sokwazi ukuzimela!
Ukuzithoba akusiyo isenzi isenzi ; "isimo sengqondo" esinokusetyenziswa ngamaxesha athile. "I-subjugctive" edlulileyo (elinye igama leNgqungquthela II) lifumana igama layo ekubeni iifom zayo zisekelwe kwixesha elidlulileyo. I- Subjunctive ndibizwa ngokuba "ngokuzimela ngoku" ngenxa yokuba isekelwe kwixesha langoku.
Kodwa musa ukuvumela loo migaqo ikudibanise: ukuzithoba akusiyo isenzi.
"Okuchasene" kokuzithoba kukubonisa. Izivakalisi ezininzi esizithethayo-ngesiNgesi okanye ngesiJamani- "zibonisa" inkcazo yenyaniso, into eyinyani, njengale: "I-Hake ke Geld." (Into eyenzeka kakhulu kuninzi lwethu!) Ukuzimela kuyayichaphazela. Ixelela umphulaphuli ukuba into ephikisana nenkoqobo okanye imimiselo, njengale: " Hätte ich das Geld, würde ich nach Europa fahren. " ("Ukuba ndibe nemali, ndiza kuYurophu.") Oku kuchazwa ngokucacileyo, " Anginayo imali kwaye andiyi eYurophu. " (ebonisa).
Enye ingxaki kwizivakalisi zesiNgesi ezizama ukufunda i- Konjunktiv kukuba ngesiNgesi ukuzithoba kuyasweleka. Kusele iindawo ezimbalwa kuphela. Sisaqhubeka sisithi, "Ukuba ndinguwe, andizange ndenze oko." (Kodwa mna andiyiwe.) Kuzwakala i-substandard okanye "engafundile" ukuthi, "Ukuba ndinguye ..." Ingxelo efana neyokuba "ukuba ndibe nemali" (andikulindelanga ukuba nayo) eyahlukileyo "xa ndifumana imali" (mhlawumbi ndiya kuba nayo). Bobabini "babe" kwaye "babe" (ixesha elidlulileyo) yiifom ezithembekileyo zesiNgesi kule mizekelo mibini ngasentla.
Kodwa ngesiJamani, nangona kukho izibambiso, ukuzithoba kuyaphila kakhulu.
Ukusetyenziswa kwayo kubalulekile ukuhambisa ingcamango yemiqathango okanye imeko engaqinisekanga. Oku kufuthi kuboniswe ngesiJamani ngento eyaziwa ngokuba yiNtlangano II ( Konjunktiv II ), ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yixesha elidlulileyo okanye elingagqibekanga-kuba lusekelwe kwiifom ezingapheliyo zesenzi.
Kulungile, masihlawule ishishini. Oku kulandelayo akusiyo inzame yokugubungela yonke imiba yeConjunktiv II kodwa kunoko ukuhlaziywa kwezinto ezibalulekileyo.
Nantsi imimiselo yendlela indlela iSigqeba II esingasetyenziswa ngayo kwisiJamani.
I-Konjunktiv II isetyenziswe kwezi zilandelayo:
Njengokuba, ngokuchasene nenyaniso ( als ob, als wenn, als, wenn )
I-Er gibt Geld aus, i-Millionär wäre.
Uchitha imali njengokungathi ungumgidi-mali.
Isicelo, unyanzelekile (ukuhlonipha!) - ngokuqhelekileyo ngeendlela (ie, können , sollen , njl)
Ngaba ungandibhalela yakho incwadi?
Ukungathandabuzeki okanye ukungaqiniseki (edlalwa ngaphambili ngu- ob okanye i- dass )
I-Wir glauben nicht, i-dass man diese I-Prozedur genehmigen würde.
Asikholelwa ukuba baya kuvumela le nkqubo.
Ubulumko, ukucinga okunqwenelekayo (ngokuqhelekileyo ngokunyusa amagama anjengomhlengikazi okanye i- doch - kunye nezivakalisi ezinemiqathango)
Hätten Sie mich nur angryufen! (nqwenela)
Ukuba undibiza nje!
Wenn i-Zeit hätte, würde ich besuchen. (umqathango)
Ukuba ndibe nexesha, ndiza kumtyelela.
Ukutshintshwa kweNgqungquthela I (xa iQumrhu loQeqesho ndiyifom echanekileyo iyafana)
Bathi baye bambona
Imigca emibini yokugqibela kwingoma yesiGerman, "Mein Hut," ilawulwa (imeko):
U-hätt 'er nicht drei Ecken,
dann wär 'er nicht mein Hut.
Ingqumbo yam, inamacala amathathu,
Iingqungquthela ezintathu zinekhanda lam,
Kwaye kwakungekho iimbombo ezintathu, (ukuba ingenayo ...)
ngoko kwakungeyena umthi wam. (... bekungayi kuba yintsimbi yam)
Uyenza njani i-Subjunctive II?
Ukufumanisa ukuba kulula kangakanani ukwenza iNgqungquthela yesi-II, iya kwinqanaba elilandelayo, Indlela yokwenza iNgqungquthela . Emva koko unokuzama iimbuzo ze-self-score score on the Subjunctive II.
Isikhokelo sokuQondanisa 'i-Apprécier' (ukuxabisa)
Yonke Efika Ngayo
2 Iincwadi eziSiseko zoMthandi weNdlu
Indlela yokudibanisa 'i-Parler' (ukuthetha) ngesiFrentshi
Yintoni uNorm? Isikhokelo soBoniso
Imigqaliselo yeDock Line kunye neMigangatho emihle yokuSebenzisa isiThuthi sakho
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseHawaii